Izindaba - Uyayazi i-stepper motor
Uyayazi i-stepper motor
I-Stepper motor iyinto yokulawula i-open-loop eguqula isiginali ye-pulse kagesi ibe ukufuduka kwe-angular noma ukufuduka komugqa. Endabeni yokungagcini ngokweqile, isivinini semoto, ukuma kwesimo kuphela kuncike kumvamisa wesiginali yesiginali nenombolo yokushaya, futhi akuthinteki ngoshintsho lomthwalo, okungukuthi, ukufaka isignali yokushaya emotweni, imoto izophenduka i-engeli yesinyathelo. Ukuba khona kwalobu budlelwane obuhambisanayo, kuhambisana ne-stepper motor kuphela iphutha lesikhathi futhi akukho phutha lokuqoqeka njalonjalo. Kwenza kube lula ukusebenzisa i-stepper motor ukulawula isivinini, isikhundla nezinye izindawo zokulawula.
Izici zezimoto ze-1.Stepper
<1> i-Angle yokujikeleza ilingana nokushaya kwenhliziyo, ngakho-ke izidingo ze-Angle eqondile nokuma okuphezulu ngokunemba kungatholakala ngokusebenzisa isilawuli esivulekile se-loop.
<2> ukuqala okuhle, ukuma, impendulo enhle nengalungile, ukulawula okulula.
<3> isinyathelo ngasinye sephutha le-Angle sincane, futhi alikho iphutha eliqoqekayo.
<4> ngaphakathi kwebanga elilawulwayo, ijubane lokujikeleza lilingana nobuningi be-pulse, ngakho-ke uhla lokudlulisa lubanzi kakhulu.
<5> lapho uphumulile, istepper motor ine-torque ephezulu yokubamba ukuhlala endaweni yokuma, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa ibhuleki ukuze ingazungezi ngokukhululeka.
I- <6> ine-RPM ephezulu kakhulu.
<7> ukuthembeka okuphezulu, akukho ukugcinwa, intengo ephansi yohlelo lonke.
<8> kulula ukulahlekelwa isinyathelo ngejubane elikhulu
<9> ijwayele ukukhiqiza isimangaliso sokudlidlizela noma sokuvezwa kwamaza kwesinye isikhathi
2.Imigomo yama-stepper motors
* Inombolo yesigaba: i-logarithm yamakhoyili wokhuselo akhiqiza izinkambu ezahlukahlukene zikazibuthe zezingongolo N no-S.M ​​isetshenziswa kakhulu.
* Inombolo yezinyathelo: Inani lamapulse adingekayo ukuqedela ushintsho lwesikhathi samandla kazibuthe noma isimo sokuziphatha simelwe yi-N, noma inani lamapulse adingekayo ukuze imoto ijikeleze i-Angle pitch pitch Angle. Thatha i-motor-phase phase, isibonelo, kunemodi esetshenziswayo enezinyathelo ezine, okungukuthi i-AB-BC-CD-DA-AB, imodi yokusebenzisa izigaba eziyisishiyagalombili, okungukuthi i-A-AB-B-BC- I-C-CD-D-DA-A.
* I-Step Angle: ehambelana nesiginali ye-pulse, ukufuduka kwe-angular kwe-motor rotor kuvezwa. = Ama-degree angama-360 (inani lamazinyo we-rotor J * inombolo yezinyathelo eziphezulu). Thatha imoto ejwayelekile yesigaba sesibili neyesine enamazinyo e-rotor njengesibonelo sezimoto ezingama-50. Ngokwenza izinyathelo ezine, i-Angle yesinyathelo ngu = 360 degrees /(50*4)=1.8 degrees (eyaziwa kakhulu njengesinyathelo sonke), ngenkathi kwenziwa izinyathelo eziyisishiyagalombili, i-Angle yesinyathelo ngu = 360 degrees / (50 * 8) = 0.9 degrees (eyaziwa njengehafu yesinyathelo).
* Ukuma kwe-torque: lapho imoto ingenamandla, i-torque yokukhiya ye-motor rotor uqobo (ebangelwa ama-harmoniki wesimo sezinyo sensimu kazibuthe namaphutha womshini).
* I-torque eqinile: umzuzu wokukhiya we-shaft motor lapho imoto ingashintshi ngaphansi kwesenzo sikagesi esimisiwe. Le torque yindinganiso yokukala ivolumu (ubukhulu bejometri) yemoto futhi izimele kumandla okushayela namandla kagesi. Yize i-torque eyi-static ilingana nenani lamandla we-electromagnetic excitation ampere-Turn futhi ihlobene negebe lomoya phakathi kwe-Rotor-gear rotor, akukhuthazwa ukwehlisa ngokweqile igebe lomoya futhi wandise i-ampere-turn yokujulisa ukwenza ngcono i-static i-torque, ezodala ukuthi ukushisa kwemoto nomsindo womshini.
I-Ac Stepper Motor, 220 Volt Ac Servo Motor, Kuvaliwe I-Loop Stepper Motor Driver, Izintambo ezihamba nge-Wire ze-6, IServo Motor Actuator, IHybrid Stepper Motor,